Sarkaal Mareykan ah oo Taliban ku tilmaamay koox arxan daran – Radio Damal
Sarkaal Mareykan ah oo Taliban ku tilmaamay koox arxan daran
Janaraalka ugu sarreeya Mareykanka ayaa kooxda Taalibaan ku tilmaamay inay yihiin “koox arxan daran” isagoo sheegay inaysan kala caddeyn inay is beddeli doonaan iyo in kale.Janaraal Mark Milley, ayaa yiri, si kastaba ha ahaatee, “waa suurtogal” in Mareykanka uu mintidiinta islaamiyiinta ah kala kaashado hawlgallada mustaqbalka ee lagula dagaallamayo argagixisada.
Ciidamada Mareykanka ayaa Talaadadii ka baxay Afghanistan, iyagoo soo afjaray dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanka ku qaatay 20 sano, kadib markii ay bilaabeen duulaan ay ku doonayeen inay dalkaasi kaga saaraan Taalibaan.kooxda ayaa hadda gacanta ku haya guud ahaan dalka, waxaana la filayaa inay ku dhawaaqaan dowlad cusub.
Gen Milley, iyo xoghayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin, ayaa markii ugu horeysay si wada jir ah fagaarayaasha uga jeediyay khudbad, tan iyo markii ciidamadii ugu dambeeyay ay ka baxeen Afghanistan.Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, ayaa si weyn loogu dhaleeceeyay sida kediska ah ee ka bixitaanka Mareykanka, taas oo horseedday burbur lama filaan ah oo ku yimid ciidammada amniga Afghaanistaan oo ciidamada Mareykanku ay tababarayeen muddo sanooyin ah.
Shirkii jaraa’id ee Arbacadii ay qabteen, Gen Milley iyo Xoghaye Austin, ayaa labaduba waxay ku ammaaneen ciidammadii ka soo shaqeeyay Afgaanistaan iyo hawlgalkii ballaarnaa ee daadgureynta.
Mar wax laga weydiiyay wada shaqeynta ay la leeyihiin Taalibaan ee ku aaddan sidii dadka looga daadgureyn lahaa garoonka diyaaradaha Kabul, ayaa Mr Austin waxa uu yiri: “Waxaan Taalibaan kala shaqeynaynay arrimo aad u adag, taasina waxay ahayd oo keliya, inaan intii aan awoodno aan dad badan dalka kaga bixino. ”
“Marka aad dagaal ku jirto waxaad samaysaa waxa lagaa rabo, si aad u yarayso qatarta hawlgalka iyo xoog -gelinta, balse ma aha waxa aad u baahan tahay inaad samayso,” ayuu raaciyay Gen Milley.
Waxa uu sheegay, in ay suurtogal tahay in Maraykanka uu la kaashado Taalibaan tallaabada mustaqbalka ee ka dhanka ah Dowladda Islaamiga ah ee IS-K, kooxdaas oo sheegatay weerar toddobaadkii hore ka dhacay bannaanka garoonka diyaaradaha Kabul, kaas oo ay ku dhinteen ilaa 170 qof, oo ay ku jiraan 13 askari oo Maraykan ah.
IS-K ayaa ah, kooxda ugu mayalka adag uguna rabshadaha badan dhammaan kooxaha jihaad doonka ah ee Afghanistan. Waxa uu khilaaf weyn kala dhexeeyaa Taalibaan, iyaga oo Taalibaan ku eedeynaya in ay joojiyeen jihaadka, ayna banneeyeen goobta dagaalka.
Mr Austin, ayaa dhanka kale sheegay in uusan doonayn inuu sameeyo wax saadaalin ah oo ku aaddan iskaashiga mustaqbalka. Laakiin, waxa uu raaciyay, in mas’uuliyiintu ay sameyn doonaan wax walbo oo ay awoodaan, si aan u hubino, xooggana u saarno fahamka shabakaddan [IS-K], iyo waqtiga aan dooranno mustaqbalka, oo aan kula xisaabtami doonno wixii ay sameeyeen” .
Guud ahaan, hawlgalkii daadgureynta ayaa lagu arkay in ka badan 123,000 oo qof oo doonayay inay ka cararaan taliskii Taalibaan oo diyaarad looga saaray dalka.
Maraykanka ayaa ku qiyaasay inay jiraan inta u dhaxaysa 100 ilaa 200 oo Maraykan ah oo weli ku sugan Afghanistan.
Kaaliyaha xoghayaha arimaha dibadda ee Mareykanka ee arimaha siyaasadda Victoria Nuland, ayaa sheegtay in dhammaan xulashooyinka suurtagalka ah la eegayo, si halkaasi looga saaro muwaadiniinta Mareykanka ee haray iyo sidoo kale dadka Mareykanka la shaqeeyay.
Dhanka kale, Xoghayaha arimaha dibadda ee UK Dominic Raab, ayaa sheegay inuusan hubin inta muwaadiniin reer UK ah ee ku haray dalka Afghaanistaan, balse la rumeysan yahay in ay boqolaal qof ka yar yihiin.Taalibaan ayaa u dabbaaldegay bixitaankii ugu dambeeyay ee ciidamada shisheeye, waxayna hadda xoogga saarayaan sidii ay dowlad u soo dhisi lahaayeen.
Ku xigeenka madaxa siyaasadda ee Taalibaan oo ku sugan dalka Qadar, Sher Abbas Stanekza, ayaa BBC Pashto u sheegay in dowlad cusub lagu dhawaaqi karo labada maalmood ee soo socota.Waxa uu sheegay in ay jiri doonto kaalin haweenku leeyihiin oo heerkoodu hooseeyo balse aysan ku jirin xilalka sar sare.Waxa kale oo uu sheegay, in kuwii ka soo shaqeeyay dowladda 20- sano ee la soo dhaafay aysan ka mid noqon doonin dowladdan cusub.